IZINTO ZASEMZINI IXESHA LOKUKHUTSHWA 4, CAST, TRAILER KUNYE NEENDABA-RADIO TIMES - INZULULWAZI
Izinto ezingaqhelekanga ixesha lokukhutshwa 4: Umlingisi, iyelenqe, itreyila kunye nayo yonke into ekufuneka uyazi
Emva kokuba umjikelo wemveliso ubethwe yimiceli mngeni enxulumene nobhubhane, ukufota kwi-Stranger Izinto zexesha lesine ekugqibeleni kusondele ekugqityweni- kwaye ngokwe-cast, izakuba yeyona inkulu okwangoku.
Isitrato soyika Inkwenkwezi uSadie Sink, odlala indawo kaMax Mayfield kwiNetflix yoluhlu lwefantasy, utyhile ukuba iziqendu zeebhetshi ezizayo ziya kuba kukude kakhulu ekuphumeni kwesithathu.
Kudliwanondlebe ne-PA, wathembisa elona xesha limnyama ngokwenene, elinokwanela ukwenza abanye abalandeli ukuba bakhathazeke nokuba bonke abalinganiswa babo abathandayo bayayenza iphile.
Isikali somboniso siya sisiya sikhula nyaka nonyaka, wongeze kuye Umhlanganisi . Kuyamangalisa ukubona ukuba bayaphi kunye nomxholo webali. Kuyamangalisa ngokwenene kulo nyaka. Kwaye indlela izibonda eziphakame ngayo ziphezulu kakhulu. Ephakamileyo kunangaphambili.
Iyavakala ke le nto yokuba u-David Harbour osandul 'ukuhlekisa usandula ukuhlekisa ngento yokuba uStranger Izinto uneliso elinye kwisiphelo esithile ngexesha elithile, ke kusenokwenzeka ukuba le bhetshi yeziqendu inokuhlwayela imbewu yexesha lokugqibela.
Funda yonke into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku malunga nezinto zangaphandle kwiXesha leNetflix.
Izinto ezingabalulekanga ixesha lonyaka 4 lokukhutshwa
Awukho umhla osemthethweni wokukhutshwa osele uqinisekisiwe okwangoku. Njengokuba iNetflix idlala ngokubamba ubhubhane wehlabathi ukukhutshwa kwe-2021 kujongeka kakhulu akunakulindeleka nayo.
Ngo-Matshi wonyaka ophelileyo, uDavid Harbour (Hopper) watyhila ngexesha le-Q & A ye-Instagram ukuba ixesha lesine kwasekuqaleni kwakufuneka liphume ekuqaleni kuka-2021, kodwa ukuba umhla wokukhutshwa uza kubuyiselwa emva kwe-COVID-19.
Ukuba izinto bekunganyanzelekanga ukuba zinqunyanyiswe kujongeka ngathi ukufota kuya kugqitywa ngo-Agasti 2020. Iskripthi sagqitywa kwithuba elidlulileyo, kwaye imveliso yaqala ngo-Matshi 2020.
Ugqirha uNowa Schnapp (Will Byers) uxelele Ifanmio ukuba ukufotwa kulungiselelwe ukurhangqa ehlotyeni ka-2021 kwaye oku kwaxhaswa ngamagqabaza kaDavid Harbour kwisiqendu sikaJuni sikaJimmy Kimmel Live, apho watyhila ukuba ukudubula kuphantse kwenziwa.
Ndifumene enye into encinci, kufanele ukuba senziwe ngo-Agasti, utshilo, nangona umboniso-onzima onje ngezi zinto zingaqhelekanga ziya kufuna iinyanga ezininzi zemveliso yangemva.
Ngapha koko, inkwenkwezi uFinn Wolfhard kutsha nje ucebise ukuba asinakulibona ixesha lesine kude kube ngu-2022, sixelela a Ifanmio Umsebenzisi ukuba Izinto ezi-Stranger 4 kufuneka ziphume ixesha elithile kunyaka olandelayo ngethemba.
UKUYA 2022 umhla wokukhutshwa ngekhe kumangalise, kodwa ngethemba lokuba iyabakhathaza abalandeli. Ewe kunjalo, kunokwenzeka ukuba uWolfhard wayengazi mpendulo ngqo ukuze izinto zigcinwe zingacacanga.
U-Co-star u-Gaten Matarazzo usebenzise iqhinga elifanayo xa wayebuzwa imibuzo ngomhla wokukhutshwa ngu Umhlanganisi ngo-Matshi 2021, besithi kusekho into encinci yokufota ukuze ugqibe.
Kukho imihla embalwa kakhulu ethembekileyo, utshilo. Ngokwenyani ingaphezulu 'kokuqikelela' xa siza kuba senza umboniso bhanyabhanya olandelayo, xa siza kusonga, xa kukhutshwa kuya kuba yiyo, yonke loo jazz kuba asazi mihla le ukuba siza kuba bhanyabhanya kwiveki ezayo.
Wongeze wathi: Ndifanele ukuba ndibekwenza imiboniso bhanyabhanya njengenyanga ezayo ngesiqwengana esikhulu kunokuba bendinaso kancinane, kodwa nangona isiza malunga neeveki ezimbini ukusukela ngoku, andikawazi umhla ngqo. Ke ngenxa yalonto, akukho ndlela yokubona ukuba siza kusonga nini.
Imveliso iqhubekile ixesha elininzi ngoku, ezinye iindawo ezikhethiweyo zigqityiwe ngaphambi kokutshixwa kokuqala kude kube nokufimiswa kwefilimu njengoko ubhubhane lwaphuma ngaphandle kolawulo.
Kwicala eliqaqambileyo, ukumisa okunyanzelweyo kuvumele ii-Duffers ukuba ziphucule izikripthi ngaphambi kokuba zibuyele ukuseta- siyacinga ukuba zinokucothisa izinto ukuba utshintsho olunxulumene nemiboniso esele yenziwe.
Bukela izinto ezingaqhelekanga ngekhadi lesipho leNetflix- ukusuka kwi- £ 15 eAmazon
Umvelisi olawulayo uShawn Levy uxelele uCollider wabona ukuba oku kulungile. Ubhubhane ngokuqinisekileyo ulibazise ukudubula kwaye ngenxa yoko ukumiliselwa kwexesha lethu langoku lesine, wavuma. Kodwa ibe nefuthe elihle kakhulu ngokuvumela abazalwana baseDuffer, okokuqala ngqa, ukuba babhale lonke ixesha laphambi kokuba silidubule kwaye sibenexesha lokubhala kwakhona ngendlela ababengafane babenayo ngaphambili ukuze umgangatho wale miboniso bhanya-bhanya ubalasele, mhlawumbi ngcono kunakuqala.
Ukudubula kuthatha ixesha elide ngamanyathelo amatsha okhuseleko asendaweni.
Ngokuqinisekileyo yinkqubo ecothayo kunesiqhelo, nto leyo ethetha into kuba sithatha ixesha lethu elimnandi ukwenza umboniso nokuba kunjalo. Ke ayizinzisi okanye ayihambelani njengoko ndicinga ukuba nabani na kuthi angathanda ukuba ibenjalo, kodwa senza konke okusemandleni kwaye siyayidlala ngendlebe, Matarazzo uxelele Abantu . Kwaye ndicinga ukuba eyona nto ibalulekileyo kukuba xa sisebenza, sonke sihlala sikhuselekile.
Oko sikwaziyo wonke lo msebenzi kuya kuba kufanelekile. Dyer uxelele uVogue Ngokunyaniseka, izikripthi ezi kakhulu . Ndonwabile kakhulu. Ndonwabile ngoNancy. Ngalo lonke ixesha siphela isizini, sonke siyacinga, izakuya phi le nto? Inokuya phi le nto? Emva koko sifumana iincwadi zeempendulo zexesha elizayo kwaye, sinje, 'Owu Thixo wam, wow, Wowu ! ’Ke, ngelixa ndingenakuthetha lukhulu, ngaphandle kokuba kuyakuba lixesha ngaphambi kokuba liphume, ngokuqinisekileyo liya kuba lilungelo. Kuya kuba kukhulu ngenene. Kuza kubakho enkulu !
Izinto zasemzini ixesha le-4 le-trailer
Itreyila epheleleyo ayikafiki emhlabeni, kodwa sinikwe inani leetafisi kubandakanya itreyila eveza ikamva likaHopper…
INetflix yakhupha itreyila yayo yamva nje nge-6 kaMeyi ibonisa ilebhu apho uGqr Brenner aqhuba khona iimvavanyo zakhe ebantwaneni, kubandakanya elishumi elinanye. Sagqibela ukuyibona ilebhu kumaxesha onyaka amabini anesibini. Njengokuba iwotshi ijonge ezantsi sibona abantwana bedlala namakhadi kwimoto yothingo, kukho ichess, kunye nebhola… iMagical Eight Ball ithi 'imiqondiso yalatha kuye' njengoko umntwana ehleka kancinci. Singathi kukubheja okukhuselekileyo ukuba oku kubuyela umva kwakhona njengoko uGqr Brenner ekhona kwaye ilizwi lilizwi lisithi: Sinento ekhethekileyo ecwangciselwe wena namhlanje.
Ikhamera ijolise kumnyango ophawulwe u-11 kwaye njengoko sijonga ngaphakathi siva: Shumi elinanye? Uyamamela? njengoko amehlo alishumi elinanye edanyaza evuleka. Ungayibukela apha ngezantsi.
Kwakukho ne-teaser ekhutshwe kwizinto ezingaqhelekanga 'kwi-YouTube ngosuku oludlulileyo olubizwa ngokuba yi' HNL Control Room '. Iqhotyoshelweyo ibonisa izikrini ezisixhenxe zeTV esicinga ukuba ziseGumbini loLawulo lweLebhu yeSizwe ye-Hawkins aka HNL. IiTV zonke ziyadanyaza, zibonisa imifanekiso yesikolo. Kukho enye i-chessboard kunye neMagic Eight konke kwakhona, kodwa sinokubona amabala egazi kubo. Loo mculo we-operatic awunakunceda iimbilini zethu.
Ezi zimbini zezintsha zangoku. INetflix yathumela i-trailer yokuqala ye-teaser yonke indlela ukubuyela kuSuku lweValentine kunyaka ophelileyo-eqinisekisa ukuba uHopper wayephila.
Iiakhawunti zeTwitter nazo bezixakekile, zithumela iividiyo ezingacacanga kunye nemifanekiso zihlekisa ngento ezayo. Ngenisa iingcinga zakho ngeposikhadi.
Kuthekani ukuba yiDemogorgon? pic.twitter.com/tPHRCs8k7j
Ababhali abangaziwayo (@strangerwriters) NgoNovemba 6, 2020
Izinto zasemzini isizini ye-4 cast: Ngubani obuyayo kwaye ngubani omtsha?
Izinto ezingaqhelekanga ezilahliweyo zikhule kule minyaka imbalwa idlulileyo, kunye nokufumana amaxhoba ambalwa, kodwa silindele ukubona ezona zinto ziphambili Izinto ezingaqhelekanga ezenziweyo buyela ixesha lesine.
Izinto ezingaqhelekanga ixesha lesine ziya kuba neenkwenkwezi; Abalishumi elinanye (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (UCharlie Heaton), uRobin (uMaya Hawke), uJoyce (uWinona Ryder) kunye noHopper (uDavid Harbour).
INetflix iye yabelana ezimbalwa imifanekiso esecaleni kwemifanekiso yabalingisi kubandakanya uCaleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Gaten Matarazzo (Dustin) noJoe Keery (Steve Harrington), emva xa beqala ukusebenza kwi-Stranger Things season yesine.
Kuba ayisiyomfihlo ncam ukuba uHopper akazange asweleke kwisizini yesithathu, iHarbour ibithetha ngokubuya kwakhe nayo.
Ukuthetha no Ifilimu iyonke U-Harbour uthe uhlala eyazi apho baya khona ngesimilo sakhe. Ndiye ndazi ukusuka nokuhamba… bendinazo ezo ngxoxo kunye nabo [abazalwana bakaDuffer] ukusukela kwixesha lokuqala. Sasisoloko sinomdla kolo luvo lovuko lweGandalf -Gandalf the Grey olwa neBalrog kwaye emva koko abe yiGandalf the White.
Abadlali abambalwa baphinde bonyuselwa kuthotho oluqhelekileyo, kubandakanya uPriah Ferguson, odlala udadewabo kaLucas uErica (kuni ngekhe nipele iMelika ngaphandle kodumo lukaErica). INetflix ibhengeze ngokusesikweni amalungu amatsha ajoyine ixesha lesine. Iingqokelela ezintathu zala maxesha amatsha kunye namagama amakhulu aphindaphindiweyo aqinisekisiwe.
Ezintsha rhoqo zibandakanya UEduardo Franco (I-Bookmart) njengo-Argyle, ochazwa njengomhlobo omtsha ka-Jonathan, umntu othanda ilitye othanda ulonwabo ohambisa ngokuzithandela ii-pie ze-pizza ze-Surfer Boy Pizza kunye ne-Sweeney Todd star UJamie Campbell Bower njengoPeter Ballard - indoda enenkathalo esebenza ngocwangco kwisibhedlele sabagula ngengqondo.
Badibene noCatherine the Great UJoseph Quinn odlala uEddie Munson, intloko yentsimbi enesibindi engama-80 eqhuba iklabhu yesihogo somlilo, iklabhu esemthethweni ye-D & D yaseHawkins kunye neenkwenkwezi zeBosch Mason Ngenxa odlala umfundi mhle uJason Carver.
Phakathi kwabo badlala iindima eziphindaphindayo akukho namnye ngaphandle kukaFreddy Kreuger ngokwakhe, URobert Englund -Kwaye kujongeka ngathi angakhuthaza amaphupha amabi njengezinto ezingekho mthethweni, kunye nomlingiswa wakhe uVictor Creel ochazwe njengendoda ephazamisekileyo neyoyikisayo evalelwe kwisibhedlele sabagula ngengqondo ngenxa yokubulala okulusizi kwiminyaka yoo-1950.
Ezinye iinkwenkwezi eziphindaphindayo zibandakanya UTom Wlaschiha (owaziwa kakhulu njengoJaqen H’ghar kwiMidlalo yeZihlalo zobukhosi) njengomgcini-ntolongo waseRussia oba ngumhlobo kaHopper, USherman Augustus (IWestworld) njengendoda ekrelekrele, engenantsingiselo ekholelwa ekubeni iyayazi indlela yokumisa ububi e-Hawkins kwaye UNikola Djuricko (Genius) njengomthubi waserashiya ongaqinisekanga nothanda iziqhulo ezimbi, imali ebandayo ebandayo, kunye nesitayile esine-peanut butter.
Okwangoku, abalandeli abanamehlo okhozi babonile amalungu amatsha amatsha kwiseti- kubandakanya U-Levon Thurman Hawke , umninawa omncinci kaMaya Hawke (Robin). Ngelixa iNetflix yenqabile ukuphawula ngala marhe, uThurman wabonwa ehleli noJoe Keery (Steve Harrington) ngo-Okthobha.
Ukujoyina i-cast yiAgents ye-SHIELD star UJoel Stoffer , oye waphoswa kwindima eyimfihlo ngoku, kunye nomdlali oxelayo IComicbook.com : Ndinendima esingekayifaki kwinto engaqhelekanga.
Andilindelanga ukuba ibe yinto efana nexesha elide… Ndathunyelwa amaphepha endawo yam kwaye ndandingazi namnye wabalingisi okanye ndingazi magama kwindawo yam.
UGqr Sam Owens (Paul Reiser) ubuyile kwisizini yesithathu, kwaye ujongeka ngathi ubuyile kwisizini yesine. UGqr Sam usebenzela iSebe lezaMandla laseMelika kwaye wenziwa uMlawuli weeMisebenzi eHabkins Lab emva kokuba uGqr Martin Brenner ephumile.
Wayesemva kophando kwiSango eliya ngasezantsi, wanceda uHopper ukuba amkele elishumi elinanye. Ngokubuya kwakhe silindele ukubona amanyathelo ngakumbi kwisebe…
Ngelixa sithetha ngoogqirha, uBrenner naye angabuya. Sibonile itiers ezimbalwa zijonga abanye abantwana kweli ziko kunye neshumi elinanye, ngaba siza kubona okungakumbi ngeBrenner kunye novavanyo awalwenzileyo? Ngelixa wayetsalwa ezantsi kwaye wahlaselwa yiDemogorgon ngexesha lokuqala, asisoze sazi ukuba umntu ufile de sibone umzimba xa kufikwa kwi-sci-fi kunye noloyiko!
Njengokuba oko kwakungonelanga, izinto ze-Stranger ze-Instagram wabelane ngoludwe yamalungu amatsha esamente kwisitayile sePhezulu esiPhantsi.
URobert Englund Uza kudlala uVictor Creel, indoda ephazamisekileyo neyoyikisayo evalelwe kwisibhedlele sabagula ngengqondo.
UEduardo Franco (I-Bookmart) idlala u-Argyle, ilitye elithanda ulonwabo, inkwenkwe yokuhambisa ipitsa kunye nomhlobo omtsha kaJonathan.
UJamie Campbell Bower (Twilight Saga, Grindelwald omncinci eHarry Potter) udlala uPeter Ballard, indoda enenkathalo esebenza ngocwangco kwisibhedlele sabagula ngengqondo.
USherman Augustus udlala uLt Colonel Sullivan, indoda engenantsingiselo ekholelwa ekubeni iyayazi indlela yokumisa ububi eHawkins.
Idayi kaMason (Ingcuka yolutsha) idlala uJason Carver, imbaleki entle, esisityebi ethandana nentombazana edumileyo esikolweni.
UNikola Djuricko Udlala uYuri, umthuthi waseRussia ongalindelwanga othanda iziqhulo ezimbi, imali ebandayo ebandayo, kunye nesitayile sebhola yamandongomane.
UTom Wlaschiha (UJaqen H’ghar) nguDmitri, unogada okrelekrele nonomtsalane waseRussia.
UJoseph Quinn Idlala u-Eddie Munson, intloko yeQela lase-Hawkins eliPhakamileyo lase-D & D, iklabhu yesihogo somlilo.
Ukufunda phakathi kwemigca (yokuphosa) apha, singathi kukho ukubheja okukhuselekileyo ukuba sishiya iiHawkins ngexesha lesine kwimozulu ebandayo yaseRussia.
NgoJuni, iNetflix yahlekisa ngomnye umjikelo wohlaziyo lokuphosa kunye nePolaroid ejonge ezantsi, ehamba ne-bio nganye nganye.
U-Anne ene-E U-Amybeth McNulty imiselwe ukudlala uVickie, opholileyo, okhawulezayo othetha ibhendi ebambe iliso lelinye lamaqhawe ethu, ngelixa iKin's Myles Truitt Iinkwenkwezi njengenkwenkwezi yebhasikithi yeHawkins uPatrick onabahlobo, italente kunye nobomi obuhle ... kude kube zizinto ezothusayo ezenza ukuba ubomi bakhe buphume kolawulo.
Ukumkanikazi waseMzantsi URegina Ting Chen imiselwe ukudlala umcebisi wesikolo u-Ms Kelly kunye ne-The Village's UGrace Van Dien ujoyine i-cast njenge-Hawkins High cheerleader uChrissy -yona ntombazana ithandwayo esikolweni enemfihlo emnyama.
Iposti ekwabelwana ngayo ngezinto ezingaqhelekanga (@strangerthingstv)
Izinto ezingabalulekanga iinkcukacha zebali lesi-4: Kuza kwenzeka ntoni?
Ngalo lonke ulibaziseko lokufota bekukho ixesha elininzi kunesiqhelo lokucinezela iinkcukacha zesakhiwo esivela kwizinto zoMntu ongaqhelekanga.
UNatalia Dyer ulakhe ngokwenyani ixesha lesine uxelele I-Independent: Ngokunyaniseka ukuba izikripthi zilungile. Ngalo lonke ixesha siphela isizini, sonke siyacinga, ‘izakuya phi le nto? Inokuya phi le nto? ’Emva koko sifumana imibhalo yexesha elizayo kwaye sifana, 'Owu thixo wam, wow, ngathi, wow!'
Wongeze: Kuya kuba kukhulu ngenene. Iya kuba nkulu!
UMatarazzo naye uthethile naye Ukuzonwabisa ngokuhlwanje malunga notshintsho lwethoni, kunye nendlela ukuguga okwenziwe ngayo kuncede ekubhaleni ukubhala.
Xa kufikwa kwitoni yexesha, ngokuqinisekileyo, ndicinga ukuba ithoni ngokuqinisekileyo ikhulile ngokuqinisekileyo, kwaye ndicinga ukuba [abadali uMat noRoss Duffer] bayenza loo nto ngenjongo kuba ndicinga ukuba bafuna umboniso wabo ukhule nabantwana babo , uthe. Njengoko sikhula njengabantu, kufuneka sikhule njengabalinganiswa. Bajongene nalo mbandela, kodwa bayawamkela, kwaye bawasebenzisela inzuzo yabo. Kwaye abaphazamiseki xa sisiba bade okanye xa amazwi ethu esiwa okanye nantoni na enjalo.
Funda ngokugqithisileyo: Izinto zasemzini 4 ithiyori- yintoni enokwenzeka kwisizini ezayo
Sigqibe isizini yesithathu ngendlela ebukhali kunye neemvakalelo. UJoyce uthathe uJonathan noWill bamshiya uHawkins kwiveni yabo yokususa kunye neshumi elinanye emva kokubhubha kukaHopper - nangona ngoku sisazi ukuba uyaphila.
UWinona Ryder kunye noDavid Harbour inkwenkwezi kwizinto ezingaqhelekanga kwiNetflix
Amagqabantshintshi asemthethweni exesha lesine abalaselisa ukubandezeleka kukaHopper: Ayizizo zonke iindaba ezimnandi kuthi 'zaseMelika'; Uvalelwe kude nekhaya lakhe kwintlango yaseKamchatka enekhephu, apho aya kujongana neengozi zomntu… kunye nezinye. Ngeli xesha, emva eMelika, into entsha eyoyikisayo iqala ukubonakala, into ekudala ingcwatyiwe, into edibanisa yonke into…
Xa kuziwa kuHopper, kunye nokwazi ukuba uyaphila siyazi ukuba sinokulindela utshintsho lomlinganiswa. Hopper kwakusoloko kufuneka itshintshe ngokweZibuko : Ke siza kubona umntu ohluke kakhulu oya phambili. Indoda enye kodwa ngendlela eyahlukileyo. Yinto entle kakhulu ukukwazi ukudlala.
Kutshanje izibuko UJimmy Kimmel Phila ukuba indima yakhe kuMhlolokazi Omnyama ongumhlolokazi wayitshintsha imbonakalo kaHopper yexesha lesine, inkwenkwezi ityhila ukuba ufumene ithuba lokudlala ijoni laseRussia u-Alexei Shostakov (AKA Red Guardian) kwinyanga emva kokufota ngexesha lesithathu Izinto zoMntu ongaqhelekanga ezisongelwe.
Bafuna ukuba ndidlale umfana oqala kwintolongo yaseRussia, utshilo. Ke kukho zonke ezi ngcamango zelenqe uHopper waya eRashiya emva koko wanxiba isuti ebalaseleyo, ngoku kungoMgcini oBomvu kumdlalo bhanyabhanya woMhlolokazi Omnyama.
Wongeze ngelithi wahamba imigama emide eqinisekisa ukuba abantakwabo Duffer babengayiphathi inkangeleko yoMhlolokazi Omnyama, ebathumela imifanekiso kwiseti. Ndandinenwele ezinde kwaye le ndevu kwaye ndandinkulu kwaye ndacinga, 'andinakuba ngumfana ofanayo oneenwele ezinde kunye neendevu enye ejele,' utshilo.
Ekugqibeleni, bendineenwele zonke kunye nazo zonke ezi ndevu kwaye besiceba ukuyenza ngale ndlela. Kwaye bendithanda, 'Madoda, asinakuyenza le nto. Ndiyathetha, ndiza kuphuma nale movie imangalisayo, andinakuba nayo iindevu neenwele. ’Ke, size nembonakalo eyahlukileyo ngokupheleleyo. Besine [Hopper] achebe intloko yakhe.
Sonke sijonge phambili ekuboneni indlela uHopper avuswa ngayo kunye nendlela ubudlelwane bakhe kunye neshumi elinanye obukhula ngayo, eziziindaba ezimnandi njengoko i-Harbour iqinisekisile ukuba siza kubuyela umva ngakumbi ngomnxeba wokubuyela kwixesha lesibini xa abalishumi elinanye bafumana iibhokisi ezibhalwe 'utata' 'IVietnam' kunye 'neNew York'.
Ukuthetha e ILiverpool Comic Con Itheyibhuli landisiwe koku. Ngexesha lesine siza kukunika into enkulu, enkulu etyhilekileyo malunga nembali kaHopper, esingakuxelelanga yona nyani malunga… sizakuyichaza ngendlela enkulu.
Yeyona nto ndiyithandayo ngaye ukuba nina anazi ngaye okwangoku, kodwa inento yokwenza nezi zinto zingemva zaseNew York, eVietnam, notata, wongeza uHarbour.
Ngaba amandla alishumi elinanye aya kubuya?
Xa kuziwa kwi-Eleven sinokulindela izinto ezinkulu ngoku ngoku engenamandla. Siyathemba ukuba baya kuphinda bavele, mhlawumbi ngelona xesha lifanelekileyo.
Kukho iithiyori zabalandeli ezimbalwa ezixhalabisayo ezijikeleze amandla akhe ezisikhathaza kancinci. Umsebenzisi weReddit weedmonkey666 ubeke umbono wokuba inyoka ilume i-Eleven inokuthetha ukuba i-Mind Flayer inokufikelela kwingqondo yayo.
Ukuba elishumi elinanye usulelekile, i-Mind Flayer inokuyilawula njengoko yenzayo ngo-Billy, Will kunye ne-flayed, ukuze ekugqibeleni imtshabalalise okanye imsebenzisele ukufumana ulawulo ngakumbi / ukusasazeka.
Nantsi ithemba ukuba kunjalo hayi Ityala, kodwa kukho ubungqina obuncinci bokuxhasa ithiyori. Isithunzi sabonwa kwintloko elishumi elinanye kwisizini yokugqibela yesithathu. Asiqinisekanga ukuba oku kuthetha ntoni, kodwa yongeza koku ukuba iSango lalikhangeleka ngathi livaliwe… kusekho iDemogorgon evalelwe ngamaSoviet.
Asisekho eHawkins kwakhona
Into esiyaziyo kukuba umboniso ngoku uza kwanda ngaphaya kwedolophu encinci yaseHawkins. I-Duffers ihlala isithi esi yayisisicwangciso, kodwa sithetha Ukuzonwabisa ngeveki bahlekisile ngelixesha lonyaka intando izakuvula kancinci… hayi ngokobungakanani, ngokwempembelelo ezizodwa, kodwa vula ngokubhekisele ekuvumeleni iiplani kwiindawo ezingaphandle kweHawkins. Ixesha lesine liza kwenzeka eRashiya, kwaye kuye kwakho izinto ezininzi ezongeziweyo- kubandakanya noonogada basejele- ababuyayo.
Ixesha elothusayo okwangoku
Ngaphezu, ngokucacileyo Izinto angamazi ixesha ezine imiselwe ukuba oyikekayo kude kube ngoku - ngokutsho Joe Keery, odlala Steve Harrington. Umdlali weqonga uxelele Ifilimu iyonke , Ndicinga ukuba kulo nyaka-kwaye ndiyazi ukuba ndithetha lo nyaka ngamnye-kodwa oku ngokuqinisekileyo kuya kuba yinto eyoyikisayo kunangaphambili, kuba unyaka ophelileyo wawumnyama mnyama.
UMatarazzo uphinde wahlekisa ngelo xesha lesine lelona loyikisayo [ixesha] kwezi zintathu zidlulileyo, endilithandayo kuba kumnandi kakhulu ukwenza ifilimu. (nge Ngeveki yaseMelika )
Ngaphandle kweHopper kunye nebali eliphambili le-arc, kunye no-Erica esiba luthotho oluqhelekileyo sinokubona ibali lakhe lencwadi lihlekisayo. Kwi-comic, u-Erica uqala ukuthengisa i-asidi eluhlaza wayifaka ngokungekho mthethweni kwilebhu yaseRussia ekupheleni kwexesha lesithathu, enyanzela abanye abathathu ukuba bangenelele ngaphambi kokuba azifake engxakini. Ngelixa iyelenqe lingabonakali libabazekayo kwiscreen esincinci, ngethemba lokuba, siyacebisa ukuba siza kubona uninzi lwee-fan ezithandayo zexesha lesine.
Ngokubhekisele kwiithiyori zexesha lesine, asazi kangako ngemvelaphi entsha kaRobin, ngenxa yoko unokuba yinto efanelekileyo yokubheja ngokuqhubeka kophando. Okanye mhlawumbi siza kufumanisa ukuba owayesakuba yintatheli wajika njani umphenyi wabucala uMurray Bauman (uBrett Gelman) waba yindawo yokuhlala abantu abahlala ezindlwini, abasela ivodka kunye nabathetha isiRashiya namhlanje. (Oku kubonakala ngathi kunokwenzeka ngoku ukuba uGelman unyuselwe kuthotho oluqhelekileyo.)
Kukhangeleka ngathi kuya kubakho isenzo esininzi ngakumbi njengoko ulutsha olunzima kakhulu lwee-Hawkins luphinda lwaphoswa edabini nezidalwa ezoyikisayo ze-Upside Down. Imeyile ekwi-Intanethi Kutshanje kwabelwane ngemipu ukusuka kuseto, kubonisa uJoe Keery (uSteve), uNatalia Dyer (uNancy), uMaya Hawke (uRobin), uSadie Sink (uMax), kunye noPriah Ferguson (uErica) belungiselela indawo yokulwa. Okwangoku, Indlela engaphantsi Imifanekiso epapashiweyo ebonisa iimoto zamapolisa eHawkins phambi kwengqushu kunye nescreen esikhulu esiluhlaza okwesibhakabhaka, kucetyiswa ukuphela kwesiphelo.
Izinto zasemzini ixesha lezihloko 4 zesiqendu
Sele sinesihloko sesigaba sokuqala sexesha lesine Isahluko sokuQala: IKlabhu yoMlilo wesihogo enkosi Iphepha le-IMDb . Ukuhlekwa kwesi siqendu kufundeka ngolu hlobo: Asisekho eHawkins kwakhona… Ukuqikelela nje apha, kodwa ngaba iKlabhu yoMlilo wesihogo ligama elitsha ulutsha olwamkelayo? Ngaba kungabalinganiswa abatsha? Yonke into esinayo yile mfanekiso we-teaser, nangona kwimpendulo tweet Izinto ezingaqhelekanga ze-Twitter zenze umfanekiso we-'Dustin 'uthi: ive i-Hellfire Club ngoku ifuna amalungu amatsha.
iqale njani ukuba ihamba njani pic.twitter.com/ylNmU2sGRu
Izinto ezingaqhelekanga (@Stranger_Things) NgoNovemba 6, 2020
Xa abalandeli bacela amagama angaphezulu enqaku, ababhali baphendule ngo: Isiqendu sesibini Phawula uMnumzana Clock kunye nesiqendu sesithathu Uyalahlekisa. Kamva bathumela i-tweet kwinto ebonakala ngathi sisiqinisekiso sokuba ezi zihloko yayiziziqhulo nje zokuhlekisa ngabalandeli, bebhala: Isiqendu 4: Amaqanda ama-Wakey Wakey kunye neBakey, ngaphambi kokuba ababhali bongeze: Oku kubizwa ngokuba kukuhlekisa. Iintloni, sikhetha ukuthanda iTick Tock Mr Clock!
NgoFebruwari 2020, Umtya weTV UMichael Ausiello uxele ukuba isizini yesine inokuba neziqendu ezilithoba, ngaphezulu kokucwangcisiweyo . Uye wathi umntu othandwayo ngumlandeli angaxelelwa ibali lakhe lemvelaphi kwelinye (okanye nangaphezulu) kwezi ziqendu zilithoba.
Ngaba eli lixesha lezinto ezingaziwayo?
Asikaze sifumane izinto zoMntu oNgaziwayo ixesha lesine okwangoku, kodwa intetho ijikela ekubeni la manqaku angaphela. Abazalwana bakaDuffer bathe banokuba namaxesha amane okanye amahlanu omboniso ngaphambi kokubiza usuku. Kuqinisekisiwe ukuba ixesha lesine li hayi ixesha lokugqibela.
Abazalwana bakaDuffer bathe sele besazi ukuba izinto ezi-Stranger zizophela njani, kwaye sele besazi ixesha elide. Ukuthetha noMhla wokugqibela uMatt Duffer uthe: Sithanda ukujonga ixesha ngalinye lonyaka njengohlobo lwebali lalo elipheleleyo.
Sineentsomi ezintle kakhulu […] kunye nexesha lonyaka, sijika iphepha kwaye sityhila kancinci ngakumbi nangakumbi.
Ke sinombono ngokubanzi apho siya khona. Siyazi ukuphela komboniso ixesha elininzi.
Kutshanje, uRoss Duffer uxelele i-CNN ukuba abazalwana basebenze kwisiphelo ngakumbi. [Ubhubhane] usinike ixesha lokuba sijonge phambili, sibone ukuba yeyiphi eyona nto ilungele umboniso. Ukuqala ukugcwalisa loo nto kusinike umbono ongcono wokuba kufuneka silibalise ixesha elingakanani, utshilo.
NgoJuni, uDavid Harbour uxelele Umhlanganisi elo xesha lesine liza kumisela isiphelo somboniso, esiya kuthi senzeke ngelinye ixesha.
Sazisa izinto ezintsha, kodwa sikwaqinisa kwaye sisonga kwicala elithile ukwenza ukuba ibe nokucaca, ukucoceka okuthe ngqo, kunye nokuphela okuqinisekileyo kwinqanaba elithile, endingenakuthetha ngako ngenene, utshilo.
Inye yeendaba ezimnandi nangona kunjalo Abazalwana bakaDuffer kuthiwa batyikitye iminyaka emininzi, inani lesithoba lijongana neNetflix ukuphuhlisa ezinye iiprojekthi ngoko kukude nokugqibela esiza kubona ngazo.
Izinto zasemzini amaxesha onyaka 1-3 ngoku ayafumaneka kwiNetflix.
Jonga izikhokelo zethu kwifayile ye- Olona luhlu lubalaseleyo kwiNetflix kwaye i Iimuvi ezilungileyo kwiNetflix . Ukuba ujonge okungakumbi ukubukela, jonga isikhokelo sethu seTV.
murray idlala nini namhlanje
imidlalo yendlala bhanyabhanya opheleleyo
Isandi somculo siphila ngokulinganayo ngo-2015
izophuma nini i-s8
uphume ngqongqo ngokuhlwanje